?????? ထိုးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ထူးခြားကို ယုံပြီးပုံအပ်လိုက်ခါမှ အခွီတွေဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ? ညီ – Maythadin
?????? ထိုးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ထူးခြားကို ယုံပြီးပုံအပ်လိုက်ခါမှ အခွီတွေဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ? ညီ
May Thadin | November 14, 2020 | Celebrity | No Comments
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်၊ ထူးခြားနဲ့ K ညီ တို့ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်ပေမယ့် အလုပ်တွေ အတူတူလုပ်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့
မြင့်မြတ်၊ ထူးခြားနဲ့ K ညီ တို့က အခုအချိန်ထိတိုင် သွားအတူ၊ စားအတူ၊ လာအတူနဲ့ တပူးပူး တတွဲတွဲရှိကြသူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း မြင့်မြတ်အပြင် ထူးခြားနဲ့ K ညီတို့ကိုလည်း တကယ့် မင်းသားကြီးတွေလိုမျိုး ချစ်ခင်အားပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်၊ ထူးခြားနဲ့ K ညီတို့ကတော့ သူတို့ ဆုံတွေ့ချိန်တိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဗီဒီယိုလေးတွေ မျှဝေပေးလေ့ရှိသလို ဒီကနေ့မှာလည်း ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရလေးကို ပြသလာပါတယ်။
မြင့်မြတ်နဲ့ ထူးခြားတို့ကတော့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း K ညီ ကို ဘောပင်နဲ့ တက်တူးထိုးပြီး စနောက်ခဲ့တာကြောင့် K ညီက “Tattoo အရမ်းကျွမ်းကျင်သော ဆရာနှစ်ယောက်နဲ့ Tattoo ထိုး‌မိသောအခါ? ပုံတွေကို ကြည့်ပါ? အပျော်သဘောစတာနော်???✌️” ဆိုပြီး
သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို အရအန်းဖောက်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။K ညီကတော့ မြင့်မြတ်နဲ့ ထူးခြားတို့ကြောင့် လက်ဖျံမှာ အရမ်းလက်ရာကောင်းတဲ့ တက်တူးပုံတစ်ပုံရရှိခဲ့ကြောင်း စစနောက်နောက်နဲ့ ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျမြားဖွဈကွတဲ့ မွငျ့မွတျ၊ ထူးခွားနဲ့ K ညီ တို့ကတော့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှော အတူတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျရငျး ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့ကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ငယျသူငယျခငျြးတှေ မဟုတျပမေယျ့ အလုပျတှေ အတူတူလုပျရငျး ရငျးနှီးခဲ့ကွတဲ့
မွငျ့မွတျ၊ ထူးခွားနဲ့ K ညီ တို့က အခုအခြိနျထိတိုငျ သှားအတူ၊ စားအတူ၊ လာအတူနဲ့ တပူးပူး တတှဲတှဲရှိကွသူတှပေဲ ဖွဈကွပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး မွငျ့မွတျအပွငျ ထူးခွားနဲ့ K ညီတို့ကိုလညျး တကယျ့ မငျးသားကွီးတှလေိုမြိုး ခဈြခငျအားပေးကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။
နစေ့ဉျနတေို့ငျးလိုလို ဆုံတှဖွေ့ဈကွတဲ့ မွငျ့မွတျ၊ ထူးခွားနဲ့ K ညီတို့ကတော့ သူတို့ ဆုံတှခြေိ့နျတိုငျးမှာ ပရိသတျတှအေတှကျ အမှတျတရ ဓာတျပုံလေးတှေ ဗီဒီယိုလေးတှေ မြှဝပေေးလရှေိ့သလို ဒီကနမှေ့ာလညျး ထူးထူးခွားခွား အမှတျတရလေးကို ပွသလာပါတယျ။
မွငျ့မွတျနဲ့ ထူးခွားတို့ကတော့ သူတို့ရဲ့သူငယျခငျြး K ညီ ကို ဘောပငျနဲ့ တကျတူးထိုးပွီး စနောကျခဲ့တာကွောငျ့ K ညီက “Tattoo အရမျးကြှမျးကငျြသော ဆရာနှဈယောကျနဲ့ Tattoo ထိုး‌မိသောအခါ? ပုံတှကေို ကွညျ့ပါ? အပြျောသဘောစတာနျော???✌️” ဆိုပွီး
သူ့ရဲ့အဖွဈကို အရအနျးဖောကျပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။K ညီကတော့ မွငျ့မွတျနဲ့ ထူးခွားတို့ကွောငျ့ လကျဖြံမှာ အရမျးလကျရာကောငျးတဲ့ တကျတူးပုံတဈပုံရရှိခဲ့ကွောငျး စစနောကျနောကျနဲ့ ပွောလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
​ရေဆိုးမြောင်းအောက်မှာနေရတဲ့ မိသားစုလေးကိုသွား​ရောက်​လှူဒါန်းခဲ့ပြီး နေထိုင်ဖို့အတွက်​ပါ စီစဉ်ပေးတော့မဲ့ ဒိန်းဒေါင် (ရုပ်​သံဖိုင်​)
အလှူပြုလုပ်ပြီးကာမှသရဲအရမ်းခြောက်ကာ ဝင်ပူးတာ​တွေခံနေရတဲ့မိဘမဲ့ဂေဟာမှ ကလေးများအတွက်မြေကွက်သွားဝယ်ပေးနေကြတဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း (ရုပ်​သံ)
ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးဧရာထံမှ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး စစ်​​ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ဟုသိရ